Askari ka tirsan ciidanka ammaanka Galkacyo oo lagu dilay hawlgal waddo bannayn ah iyo mid lagu dhaawacay. – Radio Daljir
Askari ka tirsan ciidanka ammaanka Galkacyo oo lagu dilay hawlgal waddo bannayn ah iyo mid lagu dhaawacay.
Galkacyo, Oct 27 – Askari ka tirsan ciidan ammaanka ee magaalada Galkacyo ayaa lagu dilay Suuqa bacad-laha ee magaalada Galkacyo, mid kalana waa lagu dhaawac kadib markii dabley hubaysani ay rasaas ku fureen goob ciidanku ay howl-gal ka samaynayeen.
Falkaan weerar ee lala beegsaday ciidanka ammaanka ee magaalada Galkacyo isla markaana lagu dilay askariga midka kalana lagu dhaawacay ayaa waxaa la tilmaamayaa in ay ka danbeeyaan dabley hubaysan oo ka soo kicitimay xaafadda Wada-jir ee magaalada Galkacyo halkaasi oo ay markii danbana ku carareen.
Weerakaan ayaa ka dhacay meel bartamaha suuqa ah oo uu maamulka Puntland gacanta ku hayo, waxaana xilligii weerarkaasi uu dhacayey ciidankaasi ay ku howllanaayeen howl-gal lagu banaanayey waddooyinka magaalada iyo barxadda-weyn bartamaha magaalada, waxaana dad goob joogayaal ahi ay idaacadda Daljir u sheegeen ciidanku in ay iyana rasaas rideen inkastoo aan wali la caddayn cid wax ku noqotay.
Duqa magaalada Galkacyo C/raxmaan Maxamuud X Xasan, ayaa shir jaraa?id oo uu qabtay ku faah-faahinyey dhacdadii weerar ee maanta iyo howl-galkoodii waddo bannaynta ee ay saakay bilaabeen, waxaana uu sheegay weerarkaasi in uu ahaa mid gar-darro ah oo koox wax magarato ahi ay soo qaadeen, waxaana uu intaasi ku daray in ay ka codsanayaal mas?uuliyiinta maamulka Gal-mudug in ay soo qabtaan raggii falkaasi gaystay.
Laba garanayo sababta weerarkaasi dhalisay hase yeeshee wararka qaar waxaa ay tilmaamayaan raggaasi in ay diidanaayeen bur-burinta goobaha sharci darrada ah iyo bannaynta waddooyinka la goostay, waxaana jira warar kale oo tilmaamaya in ay ka cabsi qabteen howl-galka ciidan inuu ku soo fido xaafadda ay deggan-yihiin.
Dhanka kale guddoomiyuhu waxaa uu sharaxaad ka bixiyey howl-galkooda wadda furista ah ee ay ku bur-burinayeen goobaha sharci darrada ah ee ay dadku iska dhisteen, waxaana uu sheegay arrintaasi in ay ahayd mid muddo badan dadka ay u sii sheegayeen haatanna si rasmi ah loogu guulaystay bannaynta waddooyinka iyo barxadda weyn ee magaalada.
Howl-galka maanta ayaa lagu banneeyey dhul aad u baaxad-weyn oo dad shacab ahi si qorshe la?aan ah ku dageen, taasi oo keentay inta badan waddooyinkii magaaladu in ay xirmaan.
Intii maanta ciidanku ay howl-galkaasi ku jireen, waxaa la bur-buriyey dhismayaal aad u tiro badan oo sharci darro oo iskugu jiray San-daqado, Jiingad, Miisas iyo kabarro wax lagu gato, kuwaasi oo ganacsato yar-yari wax ku iibsan jireen.
Dadka maanta goobahooda laga kiciyey ayaa horay loogu qorsheeyey in ay degaan deegaanno kale oo ay dawladdu u cabbirtay, waxaana qaarkood ay sheegeen in ay ka xun-yihiin bur-burinta goobihii ay ku ganacsan jireen halka kuwo kale oo shacabka ka mid ahna ay ku faraxsanaayeen tallaabada dawladdu ay qaaday.
Waa markii ugu horraysay oo si noocaan oo kale ah loo banneeyo dhul baaxad weyn oo bar-bar kaga jiifay bilicda magaalada.